Bere Bɛn na Bible kaa sɛ Wiase Awiei Bɛba?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Nepali Norwegian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Wiase ne n’akɔnnɔ retwam.”—1 Yohane 2:17. Ɛyɛ “wiase” bɛn? Ɛdeɛn na wɔde bɛsɛe no, na bere bɛn na wɔbɛsɛe no?
“Wiase” bɛn na ɛbɛsɛe?
Esiane sɛ wiase a yɛreka ho asɛm yi ‘ne n’akɔnnɔ bɛtwam’ nti, yɛrentumi nka sɛ asase a yɛte so yi na wɔbɛsɛe no. Mmom, “wiase” yi gyina hɔ ma nnipa a wɔapo Onyankopɔn; wɔyɛ Onyankopɔn atamfo mpo. (Yakobo 4:4) “Wɔde daa ɔsɛeɛ bɛyɛ asotwe” ama nnipa a wɔte saa. (2 Tesalonikafoɔ 1:7-9) Nanso wɔn a wɔtie Yesu Kristo na ‘wɔnyɛ wiase no fã’ no bɛnya daa nkwa.—Yohane 15:19.
Hwɛ nea 1 Yohane 2:17 san kaeɛ: “Deɛ ɔyɛ adeɛ a Onyankopɔn pɛ no tena hɔ daa.” Ɛnneɛ ɛhe na nnipa a wɔte saa bɛtena? Dwom 37:29 ka sɛ: “Ateneneefoɔ bɛnya asase no adi, na wɔatena so daapem.” Wei ma yɛhu sɛ asase yi ara so na wɔn a wɔyɛ Onyankopɔn apɛde bɛtena.
“Monnnɔ wiase anaa nneɛma a ɛwɔ wiase. Sɛ obi dɔ wiase a, Agya no dɔ nni ne mu.”—1 Yohane 2:15.
Wɔbɛsɛe wiase no sɛn?
Onyankopɔn bɛsɛe wiase no nnidiso nnidiso. Nea ɛdi kan, ɔbɛsɛe atoro som a Bible frɛ no “Babilon Kɛseɛ” anaa odwamanfoɔ no. (Adiyisɛm 17:1-5; 18:8) Wɔka sɛ wɔsom Onyankopɔn nso wɔne wiase atumfoɔ na ɛto abasakɔnmu, nanso atumfoɔ yi ara bɛtwa wɔn ho asɛe atoro som. Wɔbɛtan “odwamanfoɔ no na wɔayɛ no pasaa na wɔama no ada adagya, na wɔbɛdi ne nam na wɔde gya ahye no pasaa.”—Adiyisɛm 17:16.
Nea ɛtɔ so mmienu, Onyankopɔn bɛsɛe wiase atumfoɔ anaa “asase nyinaa so ahemfo.” Ɔbɛsɛe wɔn aka nnipa abɔnefo nyinaa ho wɔ “adeɛ nyinaa so Tumfoɔ Nyankopɔn da kɛseɛ no mu ko” mu. Bible frɛ ɔko yi “Harmagedon.”—Adiyisɛm 16:14, 16.
“Monhwehwɛ Yehowa, asase so ahobrɛasefoɔ . . . Monhwehwɛ tenenee, monhwehwɛ ahobrɛaseɛ. Ebia wɔbɛkora mo so, Yehowa abufuo da no.”—Sefania 2:3.
Bere bɛn na wɔbɛsɛe wiase?
Ansa na Onyankopɔn de ɔsɛeɛ no bɛba no, ɔbɛdi kan abɔ wiase nyinaa kɔkɔ ama wɔahu sɛ ɔde Ahenni bi reba. Ɛno na ɛbɛba abɛyi wiase ahenni nyinaa afi hɔ. (Daniel 7:13, 14) Yesu Kristo kaa sɛ: “Wɔbɛka ahennie ho asɛmpa yi wɔ asase so nyinaa de adi amanaman nyinaa adanseɛ; ɛno ansa na awieeɛ no bɛba.” (Mateo 24:14) Asɛmpaka adwuma no ma yɛhu sɛ Onyankopɔn pɛ atɛntrenee na ɔhu nnipa mmɔbɔ; ɔmpɛ sɛ ɔsɛe obiara bere a ɔmmɔɔ no kɔkɔ. Bio, adwuma yi yɛ “sɛnkyerɛnne” baako a ɛkyerɛ sɛ wiase awiei abɛn. Nsɛnkyerɛnne foforo ne akokoakoko, asasewosow, ɔkɔm, ne yaredɔm.—Mateo 24:3; Luka 21:10, 11.
Nea yɛaka ho asɛm yi da nkyɛn a, “nna a ɛdi akyire” no mu no, nnipa su bɛsesa. Bible ka sɛ: ‘Nnipa bɛyɛ ahopɛ, sikanibereɛ, awofoɔ so asoɔdenfoɔ, wɔn a wɔntumi nni wɔn ho soɔ, wɔn a wɔyɛ werɛmfoɔ, wɔn a wɔmpɛ papa, wɔn a wɔdɔ anigyedeɛ sene Onyankopɔn.’ *—2 Timoteo 3:1-5.
Wiase bɔne a ɛwɔ hɔ yi ‘bɛtwam’ nnansa yi ara.—1 Yohane 2:17
Nea yɛaka ho asɛm yi nyinaa, ɛbɛyɛ sɛ ɛhyɛɛ ase baa mu bere a Wiase Ko I pae gui afe 1914 no. Ɛfi saa bere no, wɔaka Onyankopɔn Ahenni no ho asɛmpa wɔ wiase baabiara. Obiara nim sɛ Yehowa Adansefo na ɛreyɛ adwuma yi. Nwoma a wɔde reyɛ adwuma yi koraa di adanse saa. Edin a ɛda so ne Ɔwɛn-Aban—Ɛka Yehowa Ahenni Kyerɛ.
“Monkɔ so nwɛn, na monnim da anaa dɔn no.”—Mateo 25:13.
^ nky. 14 Sɛ wopɛ wei ho nsɛm pii a hwɛ Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? nwoma no ti 9. Yehowa Adansefo na wɔtintimiiɛ. Ɛsan wɔ www.jw.org/tw.
Sɛ wuhu nea Bible ka fa wiase awiei ho a, ebia ɛbɛyɛ wo nwonwa.
Awieeɛ No Nnipa Pii Bɛnya Nkwa—Wobɛtumi Anya Nkwa
Wobɛyɛ dɛn anya nkwa? Wohwɛ a, ɛsɛ sɛ wofiri ase boaboa honam fam nneɛma bi ano de twɛn?